Dhohiinsa Austiin keessatti ta'een namooti lama madaa'an - BBC News Afaan Oromoo
Dhohiinsa Austiin keessatti ta'een namooti lama madaa'an
19 Bitooteessa 2018
Goodayyaa suuraa Polisiin bakka dhohiinsi itti ta'e sana naanneessee cufee jira
Halleellaa boombii bakka sadiitti jalqaba ji'a kana keessa ta'etti fuufuun amas dhohiinsi Austiin, Teeksaas keessatti raawwate namoota lama madeesse.
Meeshaa maramee namaaf dhufutti fakkeefamuun balbala namootaa sadii bira ka'ameen, jalqaba ji'a Bitooteessa kana keessa dhoohiinsa boombii walitti aanuun ta'een namoonni lama wayita galafataman lama ammoo miidhaan irraan gahuunsaa ni yaadatama.
Dhohiinsii Dilbata galgala ta'es sadan dursanii mudatanii waliin hidhata qabaachuuf dhiisuu ilaalchisee poolisiin waan mirkaneesse hinqabu. Garu, hanga nageenyi naannoo mirkaneefamutti, jiraattoonni mana keessa akka turan hubachiisaniiru.
Dhohiinsi ammaa kun kan raawwate dhohiinsa boombii duraan ta'an sadan ilaalchee namoota oddeeffanno kenanniif badhaasa doolaara 100,000 kenniina jechuun erga labsamee sa'a muraasa keessatti ture.
Badhaasi jedhame kunis itti dabalata badhaasa doolaara 15,000 kan bulchaa itti aanaan naannoo sana waadaa seename ture.
Namoonni duraan du'an lamaan lammii Ameeriikaa Afriikaa wayita ta'an, dhimmi kun sanyummaan walqabachu danda'a tilmaama jedhuurratti hanga ammaatti poolisiin yaada hinlaanne.
Qondaalli poolisii Briyaan Maanleey, haleellaan kun akkan amanutti ''ergaa dabarsuu barbaadu qaba'' jechuun gabastootatti dubbataniiru.
Haleellaa kana duuba ilaalcha (kaayyoo) jiru angaawwoonni mirkaneessu hindandeenye jechuunis dubbataniiru. Itti dabaluunis garuu, namoonni dhohiinsa boombii kanneen keessa harka qaban kallatiin akka angaawwoota quunnaman waamicha godhaniiru.
Ittti fufuunis Obbo Maanleey, ergaa maraamanii dhufan keessattu kan eegachaa hinjirre wayita ta'u, akka ittihinbuune keessa deebiiin haawasa akkeekkachisaniiru.
''Boombiiwwan dhohan kanneen keessaa kamiyyu utuu hinqaqabatamin kan dhohe hinturre,'' jechuunis dubbataniiru.
Poolisiin feederaalaa dhibbootaan lakkawamaniis poolisii naanno gargaara jiraatanis, hanga ammaatti kan to'anna jala oole hinjiru. Akka poolisiin jedhutti, Wiixata darbee as qofa gabaasa shakki 735 isaan qaqabeef deebi kennusaanii dubbatu.
Dhoohiinsi boombii inni jalqabaa Bitooteessa 2 wayita ta'u, nama ganna 29, Aantoonii Isteefeeniin mana isaatti galaafate. Dhoohinsi boombii lamaan ammoo guyyoota 10 booda wayita ta'u kan duraanii waliin hidhata qabas jedhameera.
Draayleen Williyaam Maasoon, dargaggeesi ganna 17 ammoo wayita maraa fidamee sana gara manatti yoo olgalchuu wayita ajjeefamu dohiinsi kun haadha isaas garmalee miidheera.
Sa'a murta'aa boodas maraa bioo dhoheen jaartii ganna 75 sanyii Ispeen tokkos miidhaan irra gaheera. Kun tarii nama biraaf kan yaadame ta'u hinoolu jechuun midiyaaleen oduu naannoo gabaasaniiru.
Waldaan misooma namoota adii hintaane irratti hojjetu kan biyyooleessaa NAACP jedhamuutti prezidaantii naanno sana kan ta'an Nilsoon Liindeer akka madda oduu NBC'tti himanitti, ajjechaan namoota lamaan kanneen irratti raawwate kun namoota maatii bebbeekamoo Afriikaa irratti kan xiyyeefateedhas jedhaniiru.
Qorattoonni akka jedhanitti, meeshaan maramaanii dhufan kunneen halkan balbala irra ka'amanii kan bulaniifi kara seera qabeesaan hinta'iniin kan dhufan ta'uusaa dubbatu.
Wayita magaalattiin haala yaaddeessa akkanarra jirtuutti, do'iin muuziiqaa hip-hop baand the Roots jedhamus doorsiisa karaa e-meeliin qaqaaberraa kan ka'e agarsiisa Sanbatarra gochuuf turan hambisaniiru.
Boodarra namni ganna 26 tokko to'anno jala oolus, boomiiwwan jedhaman kanneen waliin hidhata hinqabu jechuun poolisiin murteesseera.